Umbane waMandla oMbane
Itekhnoloji ikunika ixesha elingakumbi
Uchungechunge lwamandla ombane we-DSP oPhakamileyo bakwaMandla kusetyenziswa i-PWM kunye netekhnoloji yeFPGA, inezibonelelo zodidi oluthembekileyo, yokusebenza ezinzileyo, amandla phezulu, ephezulu kakhulu, amandla amakhulu, ingxolo ephantsi kakhulu, impendulo ekhawulezayo yexeshana, Ukuchaneka okuphezulu kunye nesigqibo esiphakamileyo. Ungcelele lwe-DSP lungabonelela ngombane wokukhupha kwaye okwangoku ukuya kuthi ga kwi-1500V kunye ne-1500A ngokwahlukeneyo. Ngokusebenza kwayo okuphezulu, Uthotho lwe-DSP lwanela imfuno yokuvavanywa kwemoto ye-EV kunye ne-compressor, I-PV inverter, umoya ovuselelekayo, kuvavanyo olusemgangathweni, okanye amandla ombane ngokugqibeleleyo.
Umthombo wamandla we-ACC Series AC udityaniswe netekhnoloji ye-IGBT / SPWM, ukusebenza okulula kodwa kubonelela ngokukhupha okunokuthenjiswa kwamandla ombane kunye nokuhamba rhoqo ukufezekisa zonke iintlobo zeemfuno zeshishini. Lo Mthombo waMandla we-AFC ubonelela ngomgangatho ophezulu wesine ecocekileyo yamandla okuphuma ukuya kwi-2 000kVA, I-THD ingaphantsi 1% kumthwalo osindisayo. Ngaphezu, kwaye ibonelela ngokuphuma kabini kwimigangatho yombane engu-0-150V okanye 0-300V(khetha 0-600V), imveliso yokuphuma rhoqo kwe-50 / 60Hz emiselweyo, 45-65Hz uhlengahlengiswa(Ukukhetha 45-400Hz). Abasebenzisi bavunyelwe ukuba balawule kude esi sixhobo ngokusebenzisa i-standard standard ye-RS232 okanye i-RS485 enokukhetha .......
Bhrawuza ezona mveliso zethu zidumileyo.
DSP Uchungechunge lwamandla oMbane oMkhulu weDC
Uthotho lwe-AFC300 3 Umthombo waMandla oMbane weSigaba esiPhakamileyo esiDibeneyo sidityaniswe netekhnoloji ye-IGBT / SPWM, Ukusebenza okulula kodwa kubonelela ngexabiso eliphakamileyo lesine sine wave ethembekileyo ...
I-LFC100 Series Linear AC yeMithombo yaMandla
Umthombo wamandla we-ACC100S Series AC udityaniswe netekhnoloji ye-IGBT / SPWM, ukusebenza okulula kodwa kubonelela ukucocwa nokuthenjwa kwemveliso yombane kunye nokuhamba rhoqo ukufezekisa zonke iintlobo zokwenza amashishini ...
AFC200 Uthotho 1 isigaba Amandla Amandla AC Aphezulu
I-Sophpower Electronics yasungulwa ngaphakathi 2006 ukuyila kunye nokwenza umgca ogqibeleleyo noluanzi wemithombo yamandla e-AC enokuhlaziywa, Imithombo yamandla ombane ye-AC kunye namandla aphezulu e-DC okubonelela ngezicelo zomhlaba jikelele. Zonke izixhobo zokuthengisa zithengiswa abameli bezentengiso abazimeleyo kunye nabasasazi kwihlabathi liphela, Zonke iiyunithi ezithunyelweyo zixhaswa kwihlabathi liphela.
idilesi:F / 2, Bldg A, Indawo yeMveliso yeSixeko, Shijie , Dongguan,Guangdong